နိုငျငံတကာမှ ပါဝငျ ပတျသကျရနျ ခိုငျလုံသော အကွောငျးမြား ရှိလာပွီ. – စှယျစုံသုတ
နိုငျငံတကာမှ ပါဝငျ ပတျသကျရနျ ခိုငျလုံသော အကွောငျးမြား ရှိလာပွီ.
အာဏာသိမျး ကောငျစီ၏ လကျရှိ ကိုဗဈ-၁၉ ကပျ ရောဂါကွီးအား စီမံခနျ့ခှဲနိုငျစှမျး မရှိမှူကွောငျ့ သုံးပတျအတှငျး လူ နှဈထောငျခနျ့ သဆေုံးသှားခဲ့ရပွီး ဖွဈသညျ၊ လကျရှိ အနအေထားမြားကွောငျ့ နိုငျငံတကာ မှ ပါဝငျ ပတျသကျရနျ လိုလာနပွေီ ဆိုသညျ့ အကွောငျးကို အမရေိကနျရှိ The Spectator မဂ်ဂဇငျး တှငျ ဘငျနကျဒဈ ရျောဂြာ မှ “Myanmar is on the verge of collapse” ပွိုလဲလုမတတျ ဖွဈလာနသေော ခေါငျးစဉျ ဖွငျ့ အောကျပါ အတိုငျး ရေးသားခဲ့သညျ။
ဆယျစုနှဈပေါငျးမြားစှာ မကျြစိပိတျ နားပိတျ ခံခဲ့ကွရသော မွနျမာ ပွညျသူ ၅၄ သနျးသညျ ယခုအခါ မနိုးထနိုငျအောငျ ဖွဈလာနသေော အိမျမကျဆိုးကွီးထဲတှငျ ခြှေးသီးခြှေးပေါကျမြား နှငျ့ ရုနျးကနျနကွေရပွီး ပကျြစီးရာ ပကျြစီးကိနျးသို့ ဦးတညျနကွေရပွီ ဖွဈသညျ။
ကံဆိုး မိုးမှောငျ ကမြှုက တခုတညျးပငျ မဟုတျ လေးခု တပွိုငျတညျး ပျေါပေါကျလာရခွငျးကွောငျ့ လညျးဖွဈသညျ။ ဤသညျက စဈတပျ၏ အာဏာသိမျးသညျ့ လုပျရပျ၊ ကာလကွာမွငျ့စှာ ဖွဈပှားနသေောပွညျတှငျးစဈကွီး အရှိနျတညီးညီး ဖွငျ့ ပွနျလညျတောကျလောကျလာနခွေငျး၊ တိုငျးပွညျ စီးပှားရေး ပွိုလဲသှားခွငျး နှငျ့ နောကျဆုံး ကျောရိုနာဗိုငျးရပျကွီးဒဏျ ခံခဲ့ရခွငျးတို့ပငျ ဖွဈသညျ။
ဖဖေျေါဝါရီ ၁ ရကျ စဈတပျ အာဏာသိမျးပွီးခြိနျမှစ၍ လူပေါငျး ၉၀၀ ကြျော အသတျခံခဲ့ရပွီး ၅,၀၀၀ ခနျ့သော လူမြားလညျး ဖမျးဆီးခံခဲ့ကွရသညျ။ ထိုမြှမကသေး ယခငျ စဈပှဲမြား အတှငျး တခါမြှ မကွုံဖူးခဲ့သညျ့ နှုနျးဖွငျ့ တိုငျးရငျးသား လူနဒေသေမြားအားဗုံးကွဲတိုကျခိုကျလာသဖွငျ့ လူမြား သိနျးခြီ၍ ဘေးလှတျရာ သို့ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျခဲ့ကွရပွနျသညျ။
၎င်းငျးတို့၏ လုပျရပျမြားကို ကုလသမဂ်ဂ က “ရိုငျးစိုငျးကွမျးတမျးလှစှာ ဖွငျ့ အငျအားသုံး အကွောကျတရား ဖွဈပျေါရေး ကမျးပိနျး” ဆငျနှဲနခွေငျးဟု ကငျပှနျးတပျ ပွောဆိုလာခဲ့သညျ၊
ထိုသို့ နိုငျငံ အနှံ့အကွမျးဖကျလာနခွေငျးမြားကွောငျ့ ကလေးသူငယျမြား သဆေုံးခဲ့ကွရသညျ့အပွငျ အမြားစု မှာလညျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဒဏျရာဒဏျခကျြမြားကို နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာအောငျ တနငျ့တပိုးကွီး ခံစားသှားရဖို့ ရှိသညျဟု ကုလ ကလေးမြား အခှငျ့အရေး ကာကှယျပေးရေး အဖှဲ့က ကွညောခကျြ ထုတျပွနျခဲ့ပွနျသညျ။
ကလေးသူငယျ ၇၅ ဦး အသတျခံခဲ့ရပွီး တထောငျနီးပါးအားလညျး ရဲအခြုပျခနျးမြား၊ အကဉျြးထောငျမြားနှငျ့ စဈတပျ စခနျးမြား အတှငျး ခြုပျနှောငျထားဆဲ ဖွဈသညျ။ ထိုအထဲတှငျ ဆန်ဒပွခဲ့သူ တဦး၏ ငါးနှဈ သမီး အရှယျပငျ ပါဝငျနသေညျ။ အခြို့ ကလေးမြားကို မိဘမြား ကိုယျစား ဓါးစာခံ အဖွဈ ဖမျးချေါသှားခဲ့ကွခွငျး ဖွဈပွီး ခွောကျနှဈ သမီး အရှယျတဦးဆိုက ဖခငျ ၏ ရငျခှငျ အတှငျးမှာပငျ ပဈသတျခံခဲ့ရသညျ။
ထိုသို့ သော အနအေထားကို တနိုငျငံလုံး ရငျဆိုငျနရေခြိနျတှငျ ကိုဗဈ ကပျရောဂါကွီး ဖွဈပျေါ လာခဲ့ခွငျးပငျ ဖွဈသညျ။ မွနျမာသညျ ပထမ နှငျ့ ဒုတိယလှိုငျးမြား ဒဏျကို အတျောလေး တညျတညျငွိမျငွိမျ ရငျဆိုငျနိုငျခဲ့သညျ။
ယခုအခါတှငျတော့ လူထုသညျ ကာဖွူးကို အံတုကာ အောကျစီဂငျြ အိုးမြားအလုအယကျ ရှာနရေသညျ့ အခွအေနေ ရောကျလာခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။ သုဿနျမြား နှငျ့ ဆေးရုံမြားတှငျလညျး သဆေုံးသူမြား၊ လူနာမြားနှငျ့ လြှံထှကျနသေညျ၊ အိမျတှငျ ဖြားနာနသေူမြားကလညျး တောငျပုံရာပုံ မက ရှိနသေညျ။
မွနျမာပွညျ၏ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှူ စနဈသညျ အခွအေနကေောငျးစဉျကပငျ အခွခေံ အဆငျ့မြှသာ ရှိခဲ့သညျ။ ယခုအခါ အာဏာသိမျးမှူကို ဆနျ့ကငျြရကောငျးလားဟု ဆိုကာ စဈတပျက ဆရာဝနျမြားကို အညိုးတကွီးနှငျ့ ပဈမှတျထားလာခွငျးကွောငျ့ ရှိသမြှ ပွိုလဲသှားရပွီ ဖွဈသညျ။
အာဏာသိမျး အဖှဲ့ အပျေါ လူထု၏ အယုံအကွညျကငျးမဲ့နမှေုမြားကွောငျ့လညျး အကပျြအတညျးကွီး က ကွောကျမကျဖှယျ အနအေထား ဖွဈလာနသေညျဟု ကုလ လူ့အခှငျ့အရေး သံတမနျ တှမျ အငျဒရူးက မှတျခကျြခခြဲ့သညျ။
စဈတပျ၏ လူ မဆနျမှုမြားက အတိုငျးအဆမရှိ ဖွဈလာနသေညျ။ နိုငျငံတှငျ လကျကနျြရှိနသေော အောကျစီဂငျြမြားကို လိုကျလံ သိမျးယူ ခဲ့ကွသညျ။ တနျးစီနသေော လူအုပျကွီးကိုပငျ သနေတျနှငျ့ ပဈဖေါကျ၍ ခွောကျလှနျ့ လူစုခှဲပွဈခဲ့သညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ တနင်ျဂနှနေကေ့ နိုငျငံအတှငျးရှိ ကကျသိုလဈ သာသနာ ပိုငျ အကွီးအကဲ ခြားလျ ဘို က စဈတပျအား လကျနကျမြား ဘေးခပြွီး လူထု၏ ကနျြးမာရေး အား စောငျ့ရှောကျပေးပါရနျ ပနျကွားလိုကျသညျ။ လူတိုငျးနီးပါး အသကျရှုခှငျ့ ရရနျ ရုနျးကနျနကွေရပွီဟုလညျး ဆိုသညျ။
မနကေ့ မိမိနှငျ့ လှနျစှာ အကြှမျးတဝငျ ရှိခဲ့သညျ့ အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျမှ ပွောခှငျ့ရ ပုဂ်ဂိုလျဖွဈခဲ့သူ ဦးညဏျဝငျးသညျ ကိုဗဈပိုး ကူးစကျခံရ၍ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။
နာမညျဆိုးဖွငျ့ ကြျောကွားလှသညျ့ အငျးစိနျ နရသိနျအကဉျြးထောငျကွီးထဲတှငျ နိုငျငံခွားသားမြားရော၊ နိုငျငံရေး အကြ‌ဉျးသား အမြားအပွားပါ ရောဂါပိုး ကူးစကျခံနရေပွီ ဖွဈသညျ့ အတှကျ မိမိ၏ မိတျဆှေ ဖွဈသူ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၏ စီးပှားရေး အကွံပေး ရှောငျတနျနယျလျ နှငျ့
အမရေိကနျ သတငျးစာ ဆရာ ဒငျနီ ဖနျစတားတို့ အတှကျ အထူးပငျ စိုးရိမျပူပနျနမေိသညျ။ ရနျကုနျတိုငျး လူမှုရေးရာ ဝနျကွီးဖွဈသော နိငျငံလငျးအတှကျလညျး စိတျပူနမေိသညျ။ စဈတပျ အတှကျ သနေတျနှငျ့ ပဈသတျ၍ မဖွဈနိုငျ၍ ကနျြနရေဈသော ဒီမိုကရကျမြားကို ဗိုငျးရပျဈ က တာဝနျယူ သတျဖွတျပေးတော့မညျ ဖွဈသညျ။
ကမ်ဘာကွီး အဖို့လညျး မွနျမာပွညျ အရေး အပျေါ တုံဏှိဘာဝနေရေနျ အကွောငျးပွခကျြ မြားက ရှိနပွေနျသညျ။ မွနျမာတှငျ အာဏာသိမျးသညျ့ ရာဇဝငျကရှိပွီး ဖွဈသညျ့အပွငျ လှတျလပျရေး ရပွီး နောကျပိုငျးလညျး တခြိနျလုံးနီးပါး စဈတပျက အုပျခြုပျလာခဲ့သညျ။
ဒီမိုကရစေီ နှငျ့ ကလူ၏သို့ မွူ၏ သို့ အဆငျ့သာ တကျလှမျးနိုငျခဲ့၍ စိတျပကျြစရာ ဖွဈနရေသညျ။ တကယျတမျး ပွောရလငျြ ပွီးခဲ့သညျ့ ဆယျနှဈ အတှငျး တံခါးဖှငျ့ပေးခဲ့သညျ ဆိုသျောလညျး ဂြီနိူဆိုကျ ဖွဈလာခဲ့ပွီး အစှနျးရောကျ မြိုးခဈြမြားသာ ခေါငျးထောငျထလာနိုငျခဲ့သညျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျလညျး သူမတနျဖိုးထားခဲ့သညျ့ စံနှုနျးမြားကို ထငျသလောကျ အကာအကှယျ မပေးနိုငျခဲ့ပွနျပေ။ မညျသို့ပငျ ဖွဈစေ သူမ၏ NLD ပါတီသညျ ရှေးကောကျပှဲတှငျ အပွတျ အသတျ အနိုငျရခဲ့ပွီး ဖွဈ၍ ယခုလို ထောငျထဲတှငျ ရှိမနသေငျ့ပဲ အစိုးရ တရပျ အဖွဈ ဖှဲ့စညျးရပျတညျနရေမညျ ဆိုသညျကား သံသယ ဖွဈစရာမလိုအောငျပငျ သခြောနပေသေညျ။
စဈတပျအား ဆနျ့ကငျြ ရငျဆိုငျနိုငျရနျ အတှကျ ရှေးခယျြတငျမွှောကျခံထားရပွီး ဖွဈသော လှတျတျော အမတျမြား၊ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစု ကိုယျစားလှယျ မြား ပါဝငျသညျ့ အမြိုးသား ညီညှတျရေး အစိုးရ NUG ကို ဖှဲ့စညျး နိူငျလာခဲ့သညျ။
ထိုအထဲတှငျ ထိပျဆုံးမှ အလငျးပွပေးနိုငျခဲ့သူက မိမိ၏ မိတျဆှကွေီးလညျး ဖွဈသညျ့ ဒေါကျတာ ဆာဆာ ပငျ ဖွဈသညျ။ နိုငျငံတကာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးရာ ဝနျကွီးလညျး ဖွဈသူ ဒေါကျတာ ဆာဆာက ဗွိတိသြှ အောကျလှတျတျော နိုငျငံခွားရေးရာ ကျောမတီ ရှမှေ့ောကျတှငျ မကွာသေးမီက ပွောကွားရာ၌ မွနျမာသညျ သရေေးရှငျရေး တမြှ အရေးကွီးနသေော အခြိနျရောကျနပွေီး လူမြိုးတုနျး သတျဖွတျခံရနိုငျဖှယျရှိသညျ့ အမှောငျဆုံးကာလမြား ရောကျလာနိုငျသညျဟု မှတျခကျြပေးသှားခဲ့သညျ။
ကိုယျကငျြ့ တရား ကငျြ့ဝတျမြားအရ မိမိတို့ အားလုံး NUG အစိုးရကို အသိအမှတျ ပွုသငျ့လှပသေညျ။ စဈတပျသညျ အာဏာသိမျးယူခဲ့မှု နှငျ့ အတူ အပွဈမဲ့လူ အမြားအပွားကို သတျဖွတျခဲ့ကွသညျ့ ရာဇဝတျမှု မွောကျသော လုပျရပျမြားကွောငျ့ အစိုးရ အဖှဲ့တရပျ အဖွဈ တရားဝငျ ရပျတညျပိုငျခှငျ့ဆုံးရှုံးသှားခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။ NUG သညျသာ ပွညျသူမြားကို တရားဝငျ ကိုယျစားပွူနသေော အစိုးရပငျ ဖွဈပသေညျ။
ဒီမိုကရစေီ နိုငျငံမြားက ရနျကုနျတှငျရှိ ၎င်းငျးတို့၏ သံရုံးမြား ပိတျခံရမညျ့ အရေးကို စိုးရှံ့နသေောကွောငျ့ NUG ကို တရားဝငျ အစိုးရ အဖွဈ အသိအမှတျပွုရနျ တုံ့နှေးနကွေခွငျးဖွဈသညျ၊ လကျရှိ ကနျ့သတျခြုပျခယျြမှုမြား အောကျတှငျ အကြိုးရှိရာ ရှိကွောငျး လုပျနိုငျ‌ ကောငျးသညျဟု ခံယူ ထားကွသညျ။
သို့သျောငွားလညျး လှတျလပျသော ကမ်ဘာနိုငျငံမြားအနဖွေငျ့ တတျနိုငျသမြှ အနီးစပျဆုံး အနအေထားဖွငျ့ NUG အား အသိအမှတျပွု ဆကျဆံသှားသငျ့သညျ။ ဗွိတိသြှ ပါလီမနျ နိုငျငံခွားရေးရာ ကျောမတီမှ NUG အား အဝေးရောကျ အစိုးရ ပုံစံမြိုးထကျ အသငျ့ စောငျ့ဆိုငျးနသေော government-in-waiting သဘောမြိုးဖွငျ့ ဆကျဆံသှားသငျ့ကွောငျး ခုခံ ပွောဆိုသှားခဲ့ပွီး ဖွဈသညျ။
နိုငျငံတကာမှ အရေးယူ ဆောငျရှကျရနျ လိုအပျလာနပွေီ ဖွဈသညျ။ ကုလသမဂ်ဂ ရှိ တှနျ အငျဒရူး မှ “အရေးပျေါ နိုငျငံစုံညှနျပေါငျး အဖှဲ့ကွီး ဖှဲ့စညျးပွီး စဈတပျ၏ အကွောကျတရား မြား ဖွဈလာအောငျ ဖနျတီးနမှေုမြားကို ရပျတနျပွဈရနျ တောငျးဆိုခဲ့ပွီး ဖွဈသညျ။
ပွငျးထနျသညျ့ ပွဈမှတျထား ပိတျဆို့ဒဏျခတျမှုမြားဖွငျ့ စဈဗိုလျခြုပျမြား၏ ဘဏ်ဍာရေး အသကျသှေးကွောမြားကို ဖွတျတောကျပဈရပမေညျ။ အခြို့ကို ပွုလုပျထားပွီး ဖွဈသျောလညျး ယခုထကျ ပို၍ လုပျရနျ လိုအပျနပေသေေးသညျ။ တကမ်ဘာလုံး အနအေထားဖွငျ့ လကျနကျ ရောငျးခမြှု ပိတျပငျသှားရနျလညျး လိုပသေညျ။
မွနျမာပွညျသူမြား အတှကျ လူသားခငျြး စာနာထောကျထားသညျ့ အကူအညီမြားအား ဖွဈနိုငျသမြှ နညျးလမျး ပေါငျးစုံကို သုံး၍ ပံ့ပိုးပေးသှားရမညျ ဖွဈသညျ။ ထိုသို့ လုပျရာတှငျလညျး စဈဗိုလျခြုပျမြား၏ အိပျကပျထဲသို့ ရောကျမသှားအောငျလညျး ရှောငျရှားရပမေညျ။
မွနျမာအား ငတျမှတျခေါငျးပါးပွီး ပွညျတှငျးစဈ ဒဏျကွောငျ့ ဗုံးဗုံးကြ ပွို လဲသှားမညျ့ နိုငျငံ ဖွဈသှားပါက မညျသူကိုမြှ အကြိုးရှိရာ ရှိကွောငျး ဖွဈလာလိမျ့မညျ မဟုတျပေ၊ ထိုသို့ ဖွဈလာပါက ဒုက်ခသညျ ပွဿနာကွီး ဖွဈပျေါလာပွီး ရောဂါပိုးမြား ပွနျ့ပှားလာမညျ့ အရငျးအမွဈကွီး ဖွဈသှားနိုငျသညျ၊ ထို့ပွငျ ဒီမိုကရစေီ ကရြှုံးပွီး အာဏာရှငျ စနဈ ရှတေ့နျး ရောကျလာနိူငျပသေညျ။
ယခုအခါနိုငျငံတကာမှ ပါဝငျ ပတျသကျလာရနျ ခိုငျလုံသော အကွောငျးတရား မြားက ရှိလာနပွေီ ဖွဈပသေညျ။
နောကျထပျရရှိသော သတငျးတရပျကတော့ အာဏာသိမျးအဖှဲ့သညျ ကမ်ဘာအဖှဲ့အစညျးကွီးအား ပမာမခနျ့ ပွုသညျ့ သဘောဖွငျ့ ကုလ ရှိ မွနျမာ သံအမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျး နရောတှငျ လောလောလတျလတျ ယူနီဖောငျး ခြှတျပေးထား သော အောငျသူရိနျ ဆိုသညျ့ လူနှငျ့ အစားထိုးရနျ ဒုတိယ အကွိမျ ကွိုးပမျးလာခဲ့ခွငျးပငျ ဖွဈသညျ။
သို့သျော ကငျမရှနျး၊ တရုတျ၊ အိုကျစလနျ၊ ပါပူဝါ နယူးဂီနီ၊ ရုရှား၊ ထရီနီဒကျ အငျ တိုဘာဂို၊ တနျဇနျနီယား၊ အမရေိကနျ နှငျ့ ဥရုဂှေး တို့ ပါဝငျသော ကုလ ကိုယျစားလှယျ စီစဈရေး ကျောမတီက ထိုကိစ်စ အပျေါ အစညျးအဝေး ချေါယူထားခွငျး မရှိဟု သိရသညျ။
အာဏာသိမ်း ကောင်စီ၏ လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ် ရောဂါကြီးအား စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း မရှိမှူကြောင့် သုံးပတ်အတွင်း လူ နှစ်ထောင်ခန့် သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်၊ လက်ရှိ အနေအထားများကြောင့်နိုင်ငံတကာ မှ ပါဝင် ပတ်သက်ရန် လိုလာနေပြီ ဆိုသည့် အကြောင်းကို အမေရိကန်ရှိ The Spectator မဂ္ဂဇင်း တွင် ဘင်နက်ဒစ် ရော်ဂျာ မှ “Myanmar is on the verge of collapse” ပြိုလဲလုမတတ် ဖြစ်လာနေသော ခေါင်းစဉ် ဖြင့် အောက်ပါ အတိုင်း ရေးသားခဲ့သည်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ မျက်စိပိတ် နားပိတ် ခံခဲ့ကြရသော မြန်မာ ပြည်သူ ၅၄ သန်းသည် ယခုအခါ မနိုးထနိုင်အောင် ဖြစ်လာနေသော အိမ်မက်ဆိုးကြီးထဲတွင် ချွေးသီးချွေးပေါက်များ နှင့် ရုန်းကန်နေကြရပြီး ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကိန်းသို့ ဦးတည်နေကြရပြီ ဖြစ်သည်။
ကံဆိုး မိုးမှောင် ကျမှုက တခုတည်းပင် မဟုတ် လေးခု တပြိုင်တည်း ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းကြောင့် လည်းဖြစ်သည်။ ဤသည်က စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းသည့် လုပ်ရပ်၊ ကာလကြာမြင့်စွာ ဖြစ်ပွားနေသောပြည်တွင်းစစ်ကြီး အရှိန်တညီးညီး ဖြင့် ပြန်လည်တောက်လောက်လာနေခြင်း၊ တိုင်းပြည် စီးပွားရေး ပြိုလဲသွားခြင်း နှင့် နောက်ဆုံး ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်ကြီးဒဏ် ခံခဲ့ရခြင်းတို့ပင် ဖြစ်သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ လူပေါင်း ၉၀၀ ကျော် အသတ်ခံခဲ့ရပြီး ၅,၀၀၀ ခန့်သော လူများလည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြရသည်။ ထိုမျှမကသေး ယခင် စစ်ပွဲများ အတွင်း တခါမျှ မကြုံဖူးခဲ့သည့် နှုန်းဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူနေဒေသများအားဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်လာသဖြင့် လူများ သိန်းချီ၍ ဘေးလွတ်ရာ သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပြန်သည်။
၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်များကို ကုလသမဂ္ဂ က “ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းလှစွာ ဖြင့် အင်အားသုံး အကြောက်တရား ဖြစ်ပေါ်ရေး ကမ်းပိန်း” ဆင်နွဲနေခြင်းဟု ကင်ပွန်းတပ် ပြောဆိုလာခဲ့သည်၊ ထိုသို့ နိုင်ငံ အနှံ့အကြမ်းဖက်လာနေခြင်းများကြောင့် ကလေးသူငယ်များ သေဆုံးခဲ့ကြရသည့်အပြင် အများစု မှာလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင် တနင့်တပိုးကြီး ခံစားသွားရဖို့ ရှိသည်ဟု ကုလ ကလေးများ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးရေး အဖွဲ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြန်သည်။
ကလေးသူငယ် ၇၅ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရပြီး တထောင်နီးပါးအားလည်း ရဲအချုပ်ခန်းများ၊ အကျဉ်းထောင်များနှင့် စစ်တပ် စခန်းများ အတွင်း ချုပ်နှောင်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် ဆန္ဒပြခဲ့သူ တဦး၏ ငါးနှစ် သမီး အရွယ်ပင် ပါဝင်နေသည်။ အချို့ ကလေးများကို မိဘများ ကိုယ်စား ဓါးစာခံ အဖြစ် ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပြီး ခြောက်နှစ် သမီး အရွယ်တဦးဆိုက ဖခင် ၏ ရင်ခွင် အတွင်းမှာပင် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။
ထိုသို့ သော အနေအထားကို တနိုင်ငံလုံး ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါကြီး ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာသည် ပထမ နှင့် ဒုတိယလှိုင်းများ ဒဏ်ကို အတော်လေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင်တော့ လူထုသည် ကာဖြူးကို အံတုကာ အောက်စီဂျင် အိုးများအလုအယက် ရှာနေရသည့် အခြေအနေ ရောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ သုဿန်များ နှင့် ဆေးရုံများတွင်လည်း သေဆုံးသူများ၊ လူနာများနှင့် လျှံထွက်နေသည်၊ အိမ်တွင် ဖျားနာနေသူများကလည်း တောင်ပုံရာပုံ မက ရှိနေသည်။
မြန်မာပြည်၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှူ စနစ်သည် အခြေအနေကောင်းစဉ်ကပင် အခြေခံ အဆင့်မျှသာ ရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ အာဏာသိမ်းမှူကို ဆန့်ကျင်ရကောင်းလားဟု ဆိုကာ စစ်တပ်က ဆရာဝန်များကို အညိုးတကြီးနှင့် ပစ်မှတ်ထားလာခြင်းကြောင့် ရှိသမျှ ပြိုလဲသွားရပြီ ဖြစ်သည်။
အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ အပေါ် လူထု၏ အယုံအကြည်ကင်းမဲ့နေမှုများကြောင့်လည်း အကျပ်အတည်းကြီး က ကြောက်မက်ဖွယ် အနေအထား ဖြစ်လာနေသည်ဟု ကုလ လူ့အခွင့်အရေး သံတမန် တွမ် အင်ဒရူးက မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
စစ်တပ်၏ လူ မဆန်မှုများက အတိုင်းအဆမရှိ ဖြစ်လာနေသည်။ နိုင်ငံတွင် လက်ကျန်ရှိနေသော အောက်စီဂျင်များကို လိုက်လံ သိမ်းယူ ခဲ့ကြသည်။ တန်းစီနေသော လူအုပ်ကြီးကိုပင် သေနတ်နှင့် ပစ်ဖေါက်၍ ခြောက်လှန့် လူစုခွဲပြစ်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကက်သိုလစ် သာသနာ ပိုင် အကြီးအကဲ ချားလ် ဘို က စစ်တပ်အား လက်နက်များ ဘေးချပြီး လူထု၏ ကျန်းမာရေး အား စောင့်ရှောက်ပေးပါရန် ပန်ကြားလိုက်သည်။ လူတိုင်းနီးပါး အသက်ရှုခွင့် ရရန် ရုန်းကန်နေကြရပြီဟုလည်း ဆိုသည်။
မနေ့က မိမိနှင့် လွန်စွာ အကျွမ်းတဝင် ရှိခဲ့သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သူ ဦးညဏ်ဝင်းသည် ကိုဗစ်ပိုး ကူးစက်ခံရ၍ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားလှသည့် အင်းစိန် နရသိန်အကျဉ်းထောင်ကြီးထဲတွင် နိုင်ငံခြားသားများရော၊ နိုင်ငံရေး အကျ‌ဉ်းသား အများအပြားပါ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံနေရပြီ ဖြစ်သည့် အတွက် မိမိ၏ မိတ်ဆွေ ဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စီးပွားရေး အကြံပေး ရှောင်တန်နယ်လ် နှင့်
အမေရိကန် သတင်းစာ ဆရာ ဒင်နီ ဖန်စတားတို့ အတွက် အထူးပင် စိုးရိမ်ပူပန်နေမိသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း လူမှုရေးရာ ဝန်ကြီးဖြစ်သော နိင်ငံလင်းအတွက်လည်း စိတ်ပူနေမိသည်။ စစ်တပ် အတွက် သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်၍ မဖြစ်နိုင်၍ ကျန်နေရစ်သော ဒီမိုကရက်များကို ဗိုင်းရပ်စ် က တာဝန်ယူ သတ်ဖြတ်ပေးတော့မည် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီး အဖို့လည်း မြန်မာပြည် အရေး အပေါ် တုံဏှိဘာဝေနေရန် အကြောင်းပြချက် များက ရှိနေပြန်သည်။ မြန်မာတွင် အာဏာသိမ်းသည့် ရာဇဝင်ကရှိပြီး ဖြစ်သည့်အပြင် လွတ်လပ်ရေး ရပြီး နောက်ပိုင်းလည်း တချိန်လုံးနီးပါး စစ်တပ်က အုပ်ချုပ်လာခဲ့သည်။
ဒီမိုကရေစီ နှင့် ကလူ၏သို့ မြူ၏ သို့ အဆင့်သာ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့၍ စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်နေရသည်။ တကယ်တမ်း ပြောရလျင် ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်နှစ် အတွင်း တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သည် ဆိုသော်လည်း ဂျီနိူဆိုက် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အစွန်းရောက် မျိုးချစ်များသာ ခေါင်းထောင်ထလာနိုင်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း သူမတန်ဖိုးထားခဲ့သည့် စံနှုန်းများကို ထင်သလောက် အကာအကွယ် မပေးနိုင်ခဲ့ပြန်ပေ။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ သူမ၏ NLD ပါတီသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ် အသတ် အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ ယခုလို ထောင်ထဲတွင် ရှိမနေသင့်ပဲ အစိုးရ တရပ် အဖြစ် ဖွဲ့စည်းရပ်တည်နေရမည် ဆိုသည်ကား သံသယ ဖြစ်စရာမလိုအောင်ပင် သေချာနေပေသည်။
စစ်တပ်အား ဆန့်ကျင် ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် အတွက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရပြီး ဖြစ်သော လွှတ်တော် အမတ်များ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ကိုယ်စားလှယ် များ ပါဝင်သည့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG ကို ဖွဲ့စည်း နိူင်လာခဲ့သည်။
ထိုအထဲတွင် ထိပ်ဆုံးမှ အလင်းပြပေးနိုင်ခဲ့သူက မိမိ၏ မိတ်ဆွေကြီးလည်း ဖြစ်သည့် ဒေါက်တာ ဆာဆာ ပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရာ ဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဆာဆာက ဗြိတိသျှ အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ ရှေ့မှောက်တွင် မကြာသေးမီက ပြောကြားရာ၌ မြန်မာသည် သေရေးရှင်ရေး တမျှ အရေးကြီးနေသော အချိန်ရောက်နေပြီး လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အမှောင်ဆုံးကာလများ ရောက်လာနိုင်သည်ဟု မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့သည်။
ကိုယ်ကျင့် တရား ကျင့်ဝတ်များအရ မိမိတို့ အားလုံး NUG အစိုးရကို အသိအမှတ် ပြုသင့်လှပေသည်။ စစ်တပ်သည် အာဏာသိမ်းယူခဲ့မှု နှင့် အတူ အပြစ်မဲ့လူ အများအပြားကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည့် ရာဇဝတ်မှု မြောက်သော လုပ်ရပ်များကြောင့် အစိုးရ အဖွဲ့တရပ် အဖြစ် တရားဝင် ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ NUG သည်သာ ပြည်သူများကို တရားဝင် ကိုယ်စားပြူနေသော အစိုးရပင် ဖြစ်ပေသည်။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများက ရန်ကုန်တွင်ရှိ ၎င်းတို့၏ သံရုံးများ ပိတ်ခံရမည့် အရေးကို စိုးရွံ့နေသောကြောင့် NUG ကို တရားဝင် အစိုးရ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် တုံ့နှေးနေကြခြင်းဖြစ်သည်၊ လက်ရှိ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများ အောက်တွင် အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်း လုပ်နိုင်‌ ကောင်းသည်ဟု ခံယူ ထားကြသည်။
သို့သော်ငြားလည်း လွတ်လပ်သော ကမ္ဘာနိုင်ငံများအနေဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ အနီးစပ်ဆုံး အနေအထားဖြင့် NUG အား အသိအမှတ်ပြု ဆက်ဆံသွားသင့်သည်။ ဗြိတိသျှ ပါလီမန် နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီမှ NUG အား အဝေးရောက် အစိုးရ ပုံစံမျိုးထက် အသင့် စောင့်ဆိုင်းနေသော government-in-waiting သဘောမျိုးဖြင့် ဆက်ဆံသွားသင့်ကြောင်း ခုခံ ပြောဆိုသွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာမှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာနေပြီ ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ ရှိ တွန် အင်ဒရူး မှ “အရေးပေါ် နိုင်ငံစုံညွန်ပေါင်း အဖွဲ့ကြီး ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်တပ်၏ အကြောက်တရား များ ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးနေမှုများကို ရပ်တန်ပြစ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်သည့် ပြစ်မှတ်ထား ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများဖြင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ ဘဏ္ဍာရေး အသက်သွေးကြောများကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရပေမည်။ အချို့ကို ပြုလုပ်ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ယခုထက် ပို၍ လုပ်ရန် လိုအပ်နေပေသေးသည်။ တကမ္ဘာလုံး အနေအထားဖြင့် လက်နက် ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်သွားရန်လည်း လိုပေသည်။
မြန်မာပြည်သူများ အတွက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီများအား ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်း ပေါင်းစုံကို သုံး၍ ပံ့ပိုးပေးသွားရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လုပ်ရာတွင်လည်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ အိပ်ကပ်ထဲသို့ ရောက်မသွားအောင်လည်း ရှောင်ရှားရပေမည်။
မြန်မာအား ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးပြီး ပြည်တွင်းစစ် ဒဏ်ကြောင့် ဗုံးဗုံးကျ ပြို လဲသွားမည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သွားပါက မည်သူကိုမျှ အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်း ဖြစ်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ၊ ထိုသို့ ဖြစ်လာပါက ဒုက္ခသည် ပြဿနာကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရောဂါပိုးများ ပြန့်ပွားလာမည့် အရင်းအမြစ်ကြီး ဖြစ်သွားနိုင်သည်၊ ထို့ပြင် ဒီမိုကရေစီ ကျရှုံးပြီး အာဏာရှင် စနစ် ရှေ့တန်း ရောက်လာနိူင်ပေသည်။
ယခုအခါနိုင်ငံတကာမှ ပါဝင် ပတ်သက်လာရန် ခိုင်လုံသော အကြောင်းတရား များက ရှိလာနေပြီ ဖြစ်ပေသည်။
နောက်ထပ်ရရှိသော သတင်းတရပ်ကတော့ အာဏာသိမ်းအဖွဲ့သည် ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းကြီးအား ပမာမခန့် ပြုသည့် သဘောဖြင့် ကုလ ရှိ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း နေရာတွင် လောလောလတ်လတ် ယူနီဖောင်း ချွတ်ပေးထား သော အောင်သူရိန် ဆိုသည့် လူနှင့် အစားထိုးရန် ဒုတိယ အကြိမ် ကြိုးပမ်းလာခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ကင်မရွန်း၊ တရုတ်၊ အိုက်စလန်၊ ပါပူဝါ နယူးဂီနီ၊ ရုရှား၊ ထရီနီဒက် အင် တိုဘာဂို၊ တန်ဇန်နီယား၊ အမေရိကန် နှင့် ဥရုဂွေး တို့ ပါဝင်သော ကုလ ကိုယ်စားလှယ် စီစစ်ရေး ကော်မတီက ထိုကိစ္စ အပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူထားခြင်း မရှိဟု သိရသည်။
စားဝတျနရေေးအတှကျ ဝမျးစာရှာဖှရေငျး သူရဲ့ ဆိုကျကားပျေါမှာပဲ သဆေုံးနရှောတဲ့ ပွညျသူတဈဦးရဲ့ စိတျမကောငျးစရာ ဖွဈရပျ